Celebrity Endorsement Tweets dị Ebe a! | Martech Zone
Sọnde, Septemba 20, 2009 Saturday, October 18, 2014 Douglas Karr
Nkwado ndị a ma ama na-arụ ọrụ? Ee, ha nwere. Ma ọ bụghị ya, anyị agaghị ahụ mgbasa ozi na ndị ọkachamara kwa ụbọchị, ka anyị ga-ahụ? Nkwado Catherine Zeta-Jones na T-Mobile kwuru na ọ ruru nde 20. N'ikpeazụ, ahịa mba T-Mobile rịrị 25% n'oge mkpọsa ahụ. Nkwado ndị amara ama dị na Twitter, kwa!
Kedu ihe kpatara ọrụ mgbasa ozi ndị ama ama ji arụ ọrụ?
Mgbasa ozi ama ama na-arụ ọrụ na ọkwa 3 dị iche iche:
Ịmara - anyị na-ahụ ọtụtụ narị mgbasa ozi kwa ụbọchị, yabụ ikike ịkọwapụta mgbasa ozi bụ isi na ndị ọkachamara nwere ike inye nke ahụ. Catherine Zeta-Jones mere ka ndị folks leba anya na Verizon karịa!
emulation - anyi bu ndi mmadu na adighi anya (nrọ) obodo na nro maka aku na uba. Inghụ onye anyị tụrụ anya ịdị ka ya ma ọ bụ masị anyị bụ ụzọ aghụghọ siri ike maka mgbasa ozi. O doro anya na Ashton Kutcher na Oprah Winfrey (rie ude) mere ka ọtụtụ nde ndị ọrụ ọhụrụ gaa Twitter… ugbu a, ha nwere ike ịme ụfọdụ ego na ya!
Pụrụ ịdabere - ịbụ onye amara dị ka azụmaahịa a na-akwanyere ùgwù bụ isi ihe na-akpata azụmaahịa azụmahịa. Ndị ahịa anaghị azụ ahịa na azụmaahịa ọzọ belụsọ ma ha tụkwasịrị obi na azụmahịa ahụ ziri ezi. Nkwado nke amara nwere ike igba oge ọ na - ewe maka azụmaahịa gị dị ka ndị nwere aha ọma.
Na igba egbe nke Na-akwado Tweets, can nwere ike ịzụta nkwado tweets site na usoro Izea. Enweghị egwuregwu ebe a - ị nwere ike ịnweta mmadụ niile site na Kim Kardashian ruo Bob Vila! M debanyere aha taa ma nwee ọnụahịa dịpụrụ adịpụ nke $ 25 kwa tweet. Echere m na nke ahụ dị mma… nyere na Kendra si price mkpado bụ nke ukwuu na-ebipụta na saịtị ahụ! (Amaghị m na Kendra ga-ebugharị ahịa nke m e-Akwụkwọ or dịkwuo okporo ụzọ na blog)… M digress.
Olee otú Tweets Nkwado Na-arụ Ọrụ
Tags: mgbasa ozi ama amankwado tweetsTwitter
Sep 21, 2009 na 5:11 PM
Echiche ndị na-akpali mmasị DK. Echere m na m ga-ekwupụta ụfọdụ nyocha na-atọ ụtọ nke na-akwado nkwado ndị a ma ama. Otutu ihe omuma a sitere na akwukwo akwukwo banyere nkwenye mmadu nke Richard Petty na John Cacioppo biputara na Elaboration Likelihood Model. Nkwupụta ha bụ na e nwere ụzọ ụzọ abụọ dị mkpa iji mee ka mmadụ kwenye echiche, nke etiti yana akụkụ (echebere na ọ ga - abụ usoro echiche iji gbochie ibu ozi). Isi okwu a bu ihe ezi uche di na ya ma nweta ego site na uche zuru oke ma uzo bu uzo nke ime uzo di iche iche. Ihe kacha adọrọ mmasị bụ na ihe na-ekpebi etu anyị si ekpebi ihe ọmụma banyere arụ ọrụ nke sitere n'akụkụ nke mmadụ bụ nke kachasị mmadụ nwere mmasị kpebisiri ike - dịka afọ, mmasị nwoke na nwanyị, ịbụ onye a ma ama, ma ọ bụ uru onwe onye. Ihe na-adọrọ mmasị n'ezie, ma enwere ọtụtụ nyocha ọzọ n'ebe ahụ ma ọ bụrụ na gị ma ọ bụ ndị na - agụ akwụkwọ ọ bụla chọrọ ile anya.